1. Foreign Husband (Application Form) | Consulate-General of the Republic of the Union of Myanmar, Los Angeles, U.S.A
Home » Data » 1. Foreign Husband (Application Form)
Requirement: Foreign Husband’s Dependent PPT Renewal Form
(ဂ)နိုင်ငံခြားသားအား ခင်ပွန်း၏ မှီခိုသူအဖြစ် လျှောက်ထားရန် ညွှန်ကြားချက်
နိုင်ငံခြားသားခင်ပွန်းနှင့် လက်ထပ်ထားသော မြန်မာအမျိုးသမီးများအား နိုင်ငံခြားသား ခင်ပွန်း၏ မှီခိုသူအဖြစ် သတ်မှတ်ပါသည်။
– နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မူရင်းနှင့် မိတ္တူ (စာရွက်အလွတ်များ မိတ္တူကူးရန်မလိုပါ)
– ရောင်စုံဓာတ်ပုံ(၂)ပုံ ( ၆ အတွင်း ရိုက်ကူးထားသောဓာတ်ပုံ၊ အရွယ်အစား ၂” x ၂”၊ နောက်ခံ အဖြူ )(ဓာတ်ပုံတစ်ပုံအား ကိုယ်ရေးရာဇဝင်တွင် ကပ်ပေးပါရန်)
– ထိုးမြဲလက်မှတ် (လျှောက်ထားသူမှ လျှောက်လွှာနှင့်အတူ ပူးတွဲတင်ပြရမည့် သတ်မှတ် ထားသော ပုံစံတွင် ထိုးမြဲလက်မှတ်အား ရေးထိုးပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။)
– အ‌မေရိကန်နိုင်ငံတွင် အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ကတ်ပြားရောင်စုံမိတ္တူ၊ သို့မဟုတ်၊ နေထိုင်ခွင့် ဗီဇာ အ‌ထောက်အထား
– နိုင်ငံခြားသားခင်ပွန်း၏ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူ၊ သို့မဟုတ်၊ နိုင်ငံသား ခံယူထားသည့် လက်မှတ်မိတ္တူ နှင့် လက်ထပ်စာချုပ်မိတ္တူ
– အပြန်လေယာဉ်စရိတ်အာမခံငွေ (Return Airfare) US$ 800
(နိုင်ငံခြားသားနှင့် လက်ထပ်ထားသော မြန်မာအမျိုးသမီးများ ဒုက္ခအခက်အခဲများ ရင်ဆိုင်ရပါက ထုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်ရန် အာမခံငွေအဖြစ် ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးသို့ ပေးသွင်းထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသို့ အပြီးပြန်လည်နေထိုင်သည့်အခါ တွင် လည်းကောင်း၊ အခြားနိုင်ငံသားအဖြစ် ခံယူသွားသည့်အခါတွင်လည်းကောင်း ပြန်လည်ထုတ်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ )
– နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ်ခ (US$ 25)
– ငွေ‌ပေးသွင်းခြင်း (ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးသို့ အခွန်အခများ ပေးဆောင်ရာတွင် Money Order ၊ သို့မဟုတ်၊ Cashier Check ၊သို့မဟုတ်၊ Cash ဖြင့်‌ပေးသွင်းရန်၊ Pay to နေရာတွင် Myanmar Consulate General ကိုလည်းကောင်း၊ From နေရာတွင် ပေးသွင်းသူအမည်နှင့် လိပ်စာတို့ကို ဖြည့်သွင်းရန်၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ်ခ၊ အပြန်လေယာဉ်စရိတ်တို့ကို MO/Check သီးခြားတစ်စောင်စီခွဲ၍ ပေးသွင်းရန်)
Download > Foreign Husband (Application Form)